20 000 ton ton Organic Fertilizer Production Line - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Organic fetiraiza fetiraiza inogadzirwa kubva kuzvipfuyo uye huku yehuku mupfudze wemhuka uye marara emiti nekukwirisa kwekushisa, izvo zvinoshanda kwazvo mukuvandudza ivhu uye kunwiwa kwefetiraiza. Organic mafetiraiza anogona kugadzirwa nemethane masara, marara ekurima, zvipfuyo uye huku yehuku uye tsvina yemasipareti. Tsvina yemanyowa iyi inoda kumwe kugadziriswa isati yashandurwa kuita mafotereza ekushambadzira ehupfumi hwekutengesa.
Iko kudyara mukushandura marara kuita hupfumi kwakakosha chose.
Runhare: + 86-13901833873
Organic fetiraiza yekugadzira mitsara inowanzo kuve yakakamurwa kuita prereatment uye granulation.
Midziyo mikuru muchikamu chekusimudzira ndiyo flip muchina. Parizvino, pane matatu makuru marara: akachekwa dumper, achifamba dumper uye hydraulic dumper. Vane hunhu hwakasiyana uye vanogona kusarudzwa zvinoenderana nezvazvinodiwa.
Panyaya yeiyo granulation tekinoroji, isu tine akasiyana granulators, senge anotenderera dhiramu granulators, akakosha magranulators eanyowani manyowa mafetira, dhisiki granulators, kaviri helix extrusion granulators, nezvimwe. Ivo vanogona kusangana nechinodiwa chepamusoro-kubvuma uye zvakatipoteredza zvine hushamwari organic manyowa. kugadzirwa.
Isu tinovavarira kupa vatengi nera uye iri nani nharaunda inogadzira yekugadzira tambo, iyo inogona kuunganidza organic manyowa ekugadzira mitsara nematoni zviuru makumi maviri, matani zviuru makumi matatu, kana matani zviuru makumi mashanu kana kupfuura chinzvimbo chekugadzira zvinoenderana chaicho kugadzirwa kudiwa.
Organic fetiraiza kugadzirwa mutsetse kunyanya ine dumper, crusher, chisanganiso, granulation muchina, dryer, kutonhora muchina, kuongorora muchina, kuputira, otomatiki mapakeji muchina uye zvimwe zvigadzirwa.
►Zviripachena zvakanakira zvakatipoteredza
Organic fetereza yekugadzira mutsara pamwe nekuburitswa pagore matani zviuru makumi maviri, kutora tsvina yezvipfuyo semuenzaniso, iyo yegore tsvina tsvina vhoriyamu inogona kusvika 80,000 cubic metres.
►Inogona kuwanikwa zviwanikwa
Tora mupfudze wezvipfuyo nehuku semuenzaniso, tsvina yenguruve yegore yakasanganiswa nezvimwe zvinokonzeresa zvinogona kuburitsa makirogiramu zviuru zviviri kusvika mazana maviri nemazana mashanu efotereza yemhando yepamusoro, ine 11% kusvika 12% yezvinhu zvakasikwa (0.45% nitrogen, 0.19% phosphorus pentaoxide, 0.6 % potassium chloride, nezvimwewo), iyo inogona kugutsa acre. Fetiraiza kudiwa kwemidziyo yemunda gore rese.
Organic fetiraiza zvidimbu zvinogadzirwa mune ye organic fetiraiza yekugadzira mutsara vakapfuma mu nitrogen, phosphorus, potasium uye zvimwe zvinovaka muviri, ine zvirimo zvinopfuura 6%. Yayo yemanyowa yezvinhu zvemukati inodarika 35%, iri pamusoro kupfuura muyero wenyika.
►Zvikwereti zvakakosha zvehupfumi
Organic fetereza yekugadzira mitsara inoshandiswa zvakanyanya mumapurazi, miti yemichero, kurima gadheni, lawn-yepamusoro magadziriso, kuvandudza ivhu uye mimwe minda, iyo inogona kuzadzikisa kudiwa kwefetiraiza yemumba mumisika yemuno neyakatenderedza, uye kuburitsa hupfumi hwakanaka.
Kuvira kwehupenyu hwehupenyu hwezvinhu zvakasvibirira zvinoita basa rakakosha mukugadzirwa kwese kwe organic fetiraiza. Yese kuvirisa ndiyo hwaro hwekugadzirwa kweyepamusoro-soro manyowa. Iwo marumpers ataurwa pamusoro ane zvadzo zvakanaka. Ose akakomberedzwa uye groove hydraulic dumpers anogona kuwana yakakwana kuvirisa ye composting, uye anogona kuwana yakakwira stacking uye kuvirisa, ine hukuru hwekugadzira kugona. Kufamba dumper uye hydraulic pafiripi muchina akakodzera ese ese ma organic zvigadzirwa, izvo zvinokwanisa kushanda zvakasununguka mukati nekunze kwefekitori, zvakanyanya kuvandudza kumhanya kweaerobic Fermentation.
Semi-nyoro zvinhu crusher zvinoberekwa fekitari yedu itsva mhando mukuru-kushanda chete crusher, riri zvikuru chinjika kuti makemikari zvinhu dzakakwirira mvura kugutsikana. Semi-nyorovera zvinhu crusher zvinowanzodavirwa kushandiswa makemikari fetiraiza kugadzirwa, iyo ine yakanaka kupwanya zvazvinoita nyoro mbishi zvinhu zvakadai huku mupfudze uye sludge. Iyo yekukuya inopfupisa zvakanyanya kugadzirwa kwekutenderera kwe organic organic uye inochengetedza yekugadzira mitengo.
Mushure mokunge mbishi yapwanywa, yakasanganiswa nezvimwe zvekubatsira uye yakamutswa zvakaenzana kugadzira granulation. Kaviri-axis yakatwasuka musanganiswa inowanzoshandiswa pre-hydration uye kusanganiswa kweupfu zvigadzirwa. Iyo yemhepo blade ine akawanda makona. Kunyangwe paine chimiro, saizi uye kuwanda kweiyo chipisi, izvo zvigadzirwa zvinogadzirwa zvinogona kusanganiswa nekukurumidza uye zvakaenzana.
Granulation maitiro ndiyo yepakati chikamu cheiyo organic fetiraiza yekugadzira mutsara. Iyo nyowani organic fetiraiza granulator inowana yemhando yepamusoro yunifomu granulation kuburikidza nekuenderera ichikurudzira, kurovera, mosaic, sphericalization, granulation uye gobvu maitiro, uye kwayo organic kuchena kunogona kunge kwakakwira se100%.
5. Dry uye inotonhorera
Roller dryer inoramba ichipomba sosi inopisa mukati mechitofu chemhepo inopisa panzvimbo yemhino kusvika kumuswe weinjini kuburikidza nefeni yakaiswa pamuswe wemuchina, kuitira kuti izvo zvinhu zvinyatso kusangana nemhepo inopisa uye kuderedza mvura zvirimo zvezvikamu.
Iyo roller inotonhorera inotonhora zvikamu pane imwe tembiricha mushure mekuomesa. Ipo ichideredza iyo tembiricha tembiricha, zvemukati zvemukati zvezvimedu zvinogona kudzikiswa zvakare, uye ingangoita 3% yemvura inogona kubviswa kuburikidza nekutonhora maitiro.
Mushure mekutonhora, kuchine zvinhu zvine hupfu muzvakapedzwa zvigadzirwa. Hupfu hwese uye zvisina kukwana zvimedu zvinogona kuongororwa kuburikidza ne roller roller. Zvadaro, inotakurwa kubva kubhandi rekutakura kuenda kune blender uye inomutswa kuti igadzire. Dzisina kukwana hombe dzinoda kupwanywa pamberi pegirazi. Chigadzirwa chakapedzwa chinoendeswa kumuchina wefetireza yekupfeka muchina.
Iyi ndiyo yekupedzisira nzira yekugadzira. Iyo yakazara otomatiki huwandu hwekuputira muchina unoburitswa nekambani yedu ndeye otomatiki yekupakata muchina yakanyatsogadzirirwa uye kugadzirirwa zvidimbu zvemhando dzakasiyana. Iyo inorema kutonga sisitimu inosangana nezvinodiwa zvehuvhu uye isina mvura, uye zvakare inogona kugadzirisa bhokisi rezvinhu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Inokodzera kuputira zvinhu zvakawanda, inogona kuyera otomatiki, kuburitsa uye kuvhara mabhegi.